မြစ်ဆုံ Media Group: January 2016
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးထက် မြန်မာ့ ရွှေဈေးပို၊ဈေးကွက်အတွင်းဝယ်လိုအား ကျ ၍ပြန်ရောင်းလိုအားမြင့်မား
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးထက် မြန်မာ့ ရွှေဈေးပို၊ဈေးကွက်အတွင်းဝယ်လိုအား
ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက်က ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးထက် မြန်မာ့ ရွှေဈေးပို၍ မြင့်နေသည်။ ထို့အတွက် ရန်ကုန်ရွှေဈေးကွက် အတွင်း ရွှေဆိုင်များတွင် ဝယ်လိုအားကျဆင်းနေပြီး ဝယ်ယူ ထားသူများက ပြန်ရောင်းလိုအားမြင့်မားနေကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအေးချို(စမ်းချောင်း)က မြန်မာ့အလင်းသို့ ပြောသည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက် နံနက်ပိုင်း ရွှေဈေးကွက်အဖွင့်၌ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးမှာ တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၁၉ ဖြင့် စဖွင့်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့ရွှေဈေးမှာ အခေါက်ရွှေ တစ်ကျပ်သားလျှင် ငွေကျပ် ၇၇၉၅ဝဝ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ညနေ ဈေးကွက်ပိတ်ချိန်၌ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး တစ်ဒေါ်လာသာကျခဲ့ သော်လည်း မြန်မာ့ရွှေဈေးမှာ ကျပ် ၇၇၆ဝဝဝ ဖြစ်သွား၍ နံနက်နှင့် ညနေ ငွေကျပ် ၃၅ဝဝ ကွာခြားခဲ့သည်။ ယခုလ အတွင်းရွှေဈေးနှုန်းကိုကြည့်ပါက ယင်းဇန်နဝါရီ ၂၇ ရက် သည် ဈေးနှုန်းအမြင့်ဆုံးအဖြစ် စံချိန်တစ်ခုဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။
မြန်မာ့ရွှေဈေးမှာ ဈေးကွက်ပိတ်ချိန်၌ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁၁၈ ဖြစ်၍ ငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းမှာ အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် မြန်မာငွေ ၁၂၉၄ ကျပ် (အနီးစပ်ဆုံး)ရှိ၍ မြန်မာ့ရွှေဈေး (အခေါက်) တစ်ကျပ်သားလျှင် ငွေကျပ် ၇၇၆ဝဝဝ ရှိခြင်း ကြောင့် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှင့် တွက်ချင့်ပါက မြန်မာ့ရွှေဈေး သည် တစ်ကျပ်သားလျှင် ငွေကျပ် ၇၇၁၅ဝဝ (အနီးစပ်ဆုံး ဈေး) ရှိရမည်ဖြစ်သော်လည်း ငွေကျပ် ၇၇၆ဝဝဝ ဖြစ် နေသည့်အတွက် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးထက် မြန်မာ့ရွှေဈေးက ငွေကျပ် ၄၅ဝဝ ပိုများနေကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်က ရွှေဈေးကွက် အဖွင့်တွင် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးမှာ တစ်အောင်စလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ဝ၆၂ ဒေါ်လာရှိပြီး မြန်မာ့ရွှေဈေးမှာ အခေါက် ရွှေတစ်ကျပ်သားလျှင် ငွေကျပ် ၇၄၄၅ဝဝ ဖြစ်၍ ဈေးကွက် အဖွင့်နှင့် အပိတ်မှာ ငွေကျပ် ၇ဝဝ သာလျှင် ကွာခြားမှုရှိ ခဲ့သည်။
တစ်ဖန် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်က ရွှေဈေး ကွက်အဖွင့်၌ ရွှေတစ်အောင်စလျှင် ဒေါ်လာ ၁ဝ၆၁ ဒေါ်လာဖြင့် စခဲ့ပြီး မြန်မာ့ရွှေဈေးမှာ တစ်ကျပ်သားလျှင် ငွေကျပ် ၇၄၃ဝဝ ရှိနေသည်။ ယင်းနေ့သည် စနေနေ့ဖြစ်၍ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကွက်ပိတ်သည့်အတွက် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး အပြောင်းအလဲမရှိသော်လည်း မြန်မာ့ရွှေဈေးကွက်ပိတ် ချိန်၌ ငွေကျပ် ၇၄၃၂ဝဝ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ယင်းနေ့အတွက် ကွာခြားချက်မှာ ငွေကျပ် ၂ဝဝ သာလျှင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအေးချို(စမ်းချောင်း)က ''ရွှေ ဈေးကွက်ရဲ့ သဘောတရားအရ ဈေးကျလာရင် ရွှေဆိုင် တွေမှာ ဝယ်လိုအားကျလာတတ်တယ်။ ဈေးတက်လာရင် ဝယ်ထားတဲ့သူတွေက ပြန်ရောင်းလိုအား ပိုများလာလေ့ရှိ ပါတယ်။ အခုမြန်မာ့ရွှေဈေးကလက်ရှိ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေး ထက် ငွေကျပ် ၅ဝဝဝ လောက်ပိုများနေတယ်။ တကယ်လို့ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးတက်မယ်ဆိုလည်း အများကြီးမတက်နိုင်ဘူး။ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးကျလာရင်တော့ မြန်မာ့ရွှေဈေးက လိုက်ကျ လာနိုင်ပါတယ်'' ဟု သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
|| ဆောင်းပါး ||
ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်ဟာ အသက် နှစ်ဆယ်အရွယ်အထိ မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ်မှာ နှစ်ဖက် ဘွားအေတွေရဲ့ စောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရသူပါ။ မိဘတွေ မွေးချင်းတွေ အနီးအနားမှာ မရှိတော့တဲ့ သူဟာ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေရဲ့ စောင့်ကြည့်မှုအောက်မှာ နေခဲ့ရပါတယ်။
သူ့အပြစ်ကတော့ အစိုးရကို တော်လှန်ခဲ့တဲ့ ကချင်မိသားစုက ပေါက်ဖွားသူတစ်ဦး ဖြစ်နေတာကြောင့်မို့လို့ ပါပဲ။
ကချင်လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်း တစ်ဦးရဲ့သမီး အသက်ငါးဆယ်အရွယ် ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ အစောပိုင်းမှာ စတင်မယ့် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကို ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးအဖြစ် တက်ရောက်ခွင့် ရတော့မှာပါ။ သူဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကချင်တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေထဲက ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးအနက် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
“တရားဝင် လမ်းကြောင်းကဝင်ပြီး လုပ်လို့ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ်။ မျှော်လင့်သလောက် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ ဆိုတာကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိသေးဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် အခြေခံတဲ့၊ သူတို့လက်ခံနိုင်တဲ့၊ မျှတတဲ့ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်၊ အခွင့်အခါပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်သွားမယ်” လို့ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်က ပြောပါတယ်။
ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန် ခြောက်လသမီး အရွယ်ကတည်းက ကချင်လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် (KIA) ရဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (KIO) ထဲကို ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူသုံးနှစ်သမီး အရွယ်မှာ မိခင်ဖြစ်သူဟာ သူ့အစ်ကိုနဲ့အတူ ခင်ပွန်းသည်ထံ လိုက်ပါ တောခိုသွားပြီး အဲဒီမှာပဲ ကလေးငါးယောက်ကို ထပ်မွေးပါတယ်။
“အဖေဘက်က အဘွား၊ အမေဘက်က အဘွားအိမ်တွေမှာ ကျွန်မ လှည့်ပတ်ပြီး ကြီးလာတယ်။ ကျွန်မ ငယ်ငယ် ကတည်းက ကျွန်မမျက်စိထဲမှာ အဖေအမေဆိုတာ မမြင်ဖူးဘူး” လို့ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့ မြစ်ကမ်းနံဘေးက သူ့ရဲ့အိမ်မှာ တွေ့ဆုံစဉ်မှာ ပြောပြပါတယ်။
“ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ထောက်လှမ်းရေးတွေ မျက်စိအောက်မှာ နေခဲ့ရတာ။ မြို့နဲ့ ဆယ်မိုင်ပတ်ဝန်းကျင် (ကျော်ပြီး) ကျွန်မတို့ သွားလို့မရဘူး။ သတင်းပို့ရတယ်။ အမြဲတမ်း အစစ်ခံရတာ။ ဒါပေမဲ့ မကြောက်တတ်ဘူး ပေါ့နော်။ ကိုယ့်မှာ သိမ်ငယ်ရတယ်လို့လည်း စိတ်ထဲမှာ မခံစားမိဘူး” လို့ နိုင်ငံရေး ခံစားချက်တွေပါတဲ့ လေသံနဲ့ သူက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်ဟာ သူ့မိသားစုနဲ့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြန်ဆုံရမယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲက သိနေပြီး အသက် နှစ်ဆယ် အရွယ်မှာတော့ စာသင်တဲ့ အလုပ်ကို စွန့်လွှတ်၊ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ဖို့ KIO ထဲကို ဝင်လိုက်ပါတယ်။
သူ့ဖခင် ဦးမရန်ဘရန်ဆန် ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ KIO ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရပြီးနောက်မှာ ကချင်ပြည်နယ် လွတ်လပ်ရေးဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကနေ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုအဖြစ် ဦးတည်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျာဆန်ခေါင်ဟာ ၁၉၈၆ ခုနှစ်က စတင်လို့ တော်လှန်ရေးသမားတွေ အကြားမှာ နေထိုင်ခဲ့ပြီး ဖခင်နဲ့ အနီးကပ် အလုပ်လုပ်နေရင်း အပြောင်းအလဲတွေ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပြီးနောက်မှာ ပါဂျောင်ဌာနချုပ် အပါအဝင် KIA ရဲ့ ခြေကုပ်စခန်း အများအပြား ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ KIO အနေနဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ စာနာထောက်ထားမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
“ဘရန်ဆန်ဟာ မျှတတဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆရှိပြီး ပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိ ပေါက်ရောက်မှုရှိတဲ့ ပထမဆုံး ကချင်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးပါ” လို့ မြန်မာပြည် လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များအကြောင်း စာအုပ်များ ရေးသားတဲ့ ဆွီဒင် စာနယ်ဇင်းသမား တစ်ဦးဖြစ်သူ ဘာတေးလစ်တနာက Myanmar Now ကို ပြောပါတယ်။
* တော်လှန်ရေးသမားဘဝမှ တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်လာ *
ဦးဘရန်ဆန်ဟာ ၁၉၉၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ လေသင်တုန်း ဖြတ်သွားချိန် သူ့လက်ထောက်က မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ထိုးပြီး လအနည်းငယ်အကြာ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာချုပ်ဟာ ၁၇ နှစ်ကြာ အသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်ဟာ KIO မှာ နောက်ထပ် ၁၆ နှစ် ထပ်နေပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်မှာ မြစ်ကြီးနားကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ KIO ဒုဥက္ကဋ္ဌဟောင်း ဒေါက်တာမနမ်တူးဂျာ တည်ထောင်ချင်တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် တိုးတက်ရေးပါတီ (KSPP) ကို ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မှတ်ပုံတင်ခွင့် မပြုခဲ့ပါဘူး။
“ကျွန်မ စစချင်းရောက်လာတော့ အရမ်းအံ့သြတယ်။ အားလုံးက အကြောက်တရားတွေနဲ့ပဲ အုပ်စိုးနေတယ် ဆိုတော့ အချင်းချင်း စကားတောင် မပြောရဲကြဘူး။ ကျွန်မတို့က ဟိုမှာနေလာတဲ့ အခါကျတော့ ဥက္ကဋ္ဌကစလို့ စစ်ဦးစီးချုပ် အကုန်လုံးက ကျွန်မတို့မှာ ဘယ်သူ့မှ ကြောက်စရာ မလိုဘူး၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလို့ရတယ်၊ အကြံပေးလို့ရတယ် ပေါ့နော်။ ဒီကလူတွေကျတော့ ကျွန်မပြန်လာတော့ အဲလိုမျိုး ဟုတ်မနေဘူး” လို့ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်က ပြောပါတယ်။
သူက ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ အခွင့်အရေးအတွက် အခြားအမျိုးသမီးတွေကိုပါ တွဲခေါ်ခဲ့ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
“ဒီမှာလည်း စစ်ကလည်း ပြန်ဖြစ်လာ၊ ခုနကပြောတဲ့ ပါတီကလည်း ထွက်မလာတဲ့ အခါကျတော့ အမျိုးသမီးတွေကို ခေါ်ပြီးတော့ awareness (အကြားအမြင်) လေးတွေ လုပ်ရအောင် ဆိုပြီးတော့ နည်းနည်း influence (သြဇာလွှမ်းမှု) ဖြစ်နိုင်မယ့် ရပ်ကွက်တိုင်းကနေ အမျိုးသမီး နှစ်ယောက်စီ နည်းနည်းစုပြီးတော့ ဒီမှာပဲ စခဲ့ကြတာ။ ကျွန်မတို့ ရနိုင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာ စာတမ်းလေးတွေနဲ့ ဝင်ပြီးတော့ ကလေးတွေလိုပဲ ဖတ်ကြတာ” လို့ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်က ပြောပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်ဟာ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လမှာ ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီး တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြန်လည်စတင်တာကြောင့် လူပေါင်းသောင်းနဲ့ ချီပြီး အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ခဲ့ရပါတယ်။
“အစိုးရကလည်း ပြောတာတော့ national reconciliation (အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး) ပြောတယ်၊ လုပ်တာကတော့ စစ်တပ်အင်အားကလည်း တောက်လျှောက် ချဲ့ပြီးရင်း ချဲ့နေတယ်။ နောက် မြစ်ဆုံကိစ္စတွေ၊ မြေသိမ်းတာတွေ၊ အမျိုးသမီးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မုဒိမ်းကိစ္စတွေကလည်း တောက်လျှောက် ဖြစ်နေတယ်” လို့ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်က ဆိုတယ်။
“ကချင်ဆရာမလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ ကိစ္စကတော့ မီဒီယာကလည်း ပွင့်သွားတဲ့ အခါကျတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံး မြန်မြန်ဆန်ဆန် သိသွားတာပေါ့။ ဒီလိုအလားတူ ကိစ္စက ကျွန်မတို့ ဟိုဘက်မှာ ရှိနေကတည်းက တောက်လျှောက် ဖြစ်နေတာ။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှမသိဘူး”
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က မြစ်ဆုံရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကို ဆိုင်းငံ့ထားဖို့ ၂ဝ၁၁၊ စက်တင်ဘာလမှာ ကြေညာလိုက်တဲ့အခါ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန် အပါအဝင် ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေဟာ အောင်ပွဲအထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီက အကူအညီ တောင်းခဲ့ပေမယ့် တုံ့ပြန်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရခဲ့ပါဘူး။
အဲဒီလို အခမ်းအနား ကျင်းပတဲ့နေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြစ်ကြီးနားကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်မှု အတွက် ရောက်ခဲ့ပေမယ့် အခမ်းအနား မတက်ခဲ့ပါဘူး။
“အားလုံး စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်။ နည်းနည်းတော့ respect (လေးစားမှု) ပေးစေချင်တာပေါ့” လို့ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်က ဆိုတယ်။
ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်တို့ဟာ ပြည်သူတွေပါဝင်တဲ့ အခမ်းအနားများ ကျင်းပပေးခဲ့ပြီး အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အား ရစေခဲ့ပါတယ်။
* NLD က အားသာနေတယ် *
ကချင်ပြည်နယ် ကောင်းစားရေးကို ကချင်လူမျိုးတွေ ကိုယ်တိုင်သာ အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်မယ် ဆိုတာကို အခြားတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် အသီးသီးလိုပဲ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်ကလည်း ယုံကြည်ထားပါတယ်။
သူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ အမြင်ကတော့ တူပုံမပေါ်ပါဘူး၊ ကချင်ပြည်နယ်ထဲက မဲဆန္ဒနယ် ၇ဝ မှာ ကချင်ပါတီနှစ်ခုက ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးသာ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ မဲတွေကွဲသွားတာ၊ မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ လိုလားချက်က စစ်တပ်ထောက်ခံထားတဲ့ အစိုးရကို ဖယ်ရှားချင်တာ အစရှိတာတွေကြောင့် အခုလို မဲရလဒ် ထွက်ရတာလို့ သူက ဆိုပါတယ်။
“၂ဝ၁ဝ တုန်းကနဲ့ နည်းနည်းလေး ပြောင်းပြန် ဖြစ်သွားတာက ဟိုတုန်းက ပါတီဖွဲ့ခွင့် မရဘူး။ အခု ၂ဝ၁၅ ကျတော့ သူလုပ်မယ် ဆိုတာလည်း ကျွန်မ မသိဘူး၊ ကျွန်မလုပ်မယ် ဆိုတာလည်း သူမသိဘူးဆိုတော့ ကိုယ့်အစုလေးနဲ့ကိုယ် (ကချင်ပါတီတွေ) အများကြီး ဖွဲ့လာကြတယ်” လို့ သူက ထောက်ပြပါတယ်။
ဖက်ဒရယ်စနစ်ကို လိုချင်တယ်ဆိုရင် ကချင်ပါတီ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဖို့ လိုတယ်ဆိုတာသိလို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင်အချိန်အထိ ကချင်ပါတီတွေက မိမိတို့ အနိုင်ရမယ်လို့ အပြည့်အဝ ယုံကြည်နေခဲ့ကြောင်း ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်က ဆိုပါတယ်။
ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်ဟာ ဒေါက်တာတူးဂျာ ထူထောင်ထားတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် ဒီမိုကရေစီပါတီကနေ အင်ဂျန်းယန် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ KIO အရာရှိဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ သူ့ခင်ပွန်း ဖြစ်သူကလည်း အခြားပါတီတစ်ခုကနေ ဝင်ပြိုင်ခဲ့ပေမယ့် အနိုင်မရခဲ့ပါဘူး။
“အင်ဂျန်းယန်က လုပ်ထားတာတွေ အများကြီးရှိတယ်၊ လုပ်စရာတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ မြစ်ပဲ ခြားပေမယ့် လူတွေရဲ့ အသိအမြင်တွေက ကွာတယ်။ မနက်အစောကြီးဆို တောင်ယာသွားပြီ။ ဒါပဲရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့အတွက် ဝမ်းရေး မဖူလုံဘူး” လို့ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်က ရှင်းပြပါတယ်။
“မှတ်ပုံတင်ရမယ့် အချိန် အရမ်းနီးသွားတော့ ကွင်းဆင်းဖို့အချိန်ကလည်း မရတော့ အဲဒါနဲ့ အင်ဂျန်းယန် ၂ (မဲဆန္ဒနယ်မြေ)ကို ရွေးဖြစ်သွားတာ။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်၊ အဖော်ကောင်းတဲ့ ပါတီနဲ့ပဲ တွဲလိုက်တာပါ”
လုံခြုံရေး အခြေအနေကြောင့် အင်ဂျန်းယန် မဲဆန္ဒနယ်မှာ ပါဝင်တဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း ၃၅ ခု အနက်က တစ်ခုမှာသာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်ဟာ စုစုပေါင်း မဲအရေအတွက် ၃၈၆ မဲအနက် ထောက်ခံမဲ ၂ဝ၃ မဲရခဲ့ပြီး ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း သာသာနဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။
“ကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာက လုပ်စရာတွေက အများကြီးရှိနေတယ်။ ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ဘာမှ သေချာပေါက် လုပ်လို့မရဘဲနဲ့ လွှတ်တော်မှာ ငါးနှစ်လောက် သွားအိပ်ငိုက်နေတာမျိုးလည်း မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့နော်။ ပထမဦးဆုံးကတော့ ဒေသအတွက် ကိုယ်ရလာတဲ့ အခွင့်အရေးလေးအပေါ်မှာ တတ်နိုင်သလောက် လုပ်လို့ရတယ်။ အပြင်မှာ နေတာနဲ့စာရင်၊ အပြင်မှာပြောတာနဲ့စာရင် အထဲမှာနေတာ၊ ပြောတာက ပိုပြီးခိုင်မာတယ်” လို့ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်က ရှင်းပြပါတယ်။
သို့သော်လည်း လွှတ်တော်ထဲမှာ ပါတီတစ်ခုတည်းက လွှမ်းမိုးထားတာကိုတော့ သူက သဘောမကျပါဘူး။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက လွှတ်တော်ထဲ နေရာအများစုကို ယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ NLD က အလားတူ အစားထိုး ဝင်ရောက်တဲ့ အခြေအနေဟာ “မဖြစ်သင့်ဘူး” လို့ သူက ပြောပါတယ်။
* အရည်အချင်းနှင့်ဘဝမျိုးစုံ *
ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်ဟာ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်မှာ အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က အမျိုးသမီးများထဲက တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က အမျိုးသမီးတွေထဲမှာဆိုရင် မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကို ထူထောင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီး လဖိုင်ဆန်ရော် ပါဝင်ပြီး သူဟာ အာရှတိုက်ရဲ့ နိုဘယ်ဆုလို့ ပြောလို့ရတဲ့ Ramon Magsaysay Award ဆုကို ရရှိထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသမီးရေး၊ လယ်မြေရေးရာ စသောနေရာတွေမှာ တက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ ကချင်အမျိုးသမီးတွေ အများအပြားပါပဲ။
ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်ဟာ Kachin State Public Company Limited ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်တယ်။ သူ့ကုမ္ပဏီဟာ ရေ၊ မီး တပ်ဆင်ပေးရေးနဲ့ အခြားစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကို အစိုးရနဲ့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ တစ်ချိန်က ရန်ဘက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေ ဒီလို ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ထားတာကို The Economist မဂ္ဂဇင်းက 'ထူးခြားတဲ့ ပုဂ္ဂလိကနှင့် နိုင်ငံပိုင်ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံ' လို့ မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။
“ကချင်ပြည်နယ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ သစ်လုံးတွေ ရောင်းတာ၊ ဖားကန့်မှာတူးတာ တွေနဲ့စာရင် အခြားဟာတွေ ရှိပါသေးတယ် ဆိုတာကို ကချင်တွေကိုလည်း ပြချင်တာပါ” လို့ သူက ရှင်းပြပါတယ်။
သူက ဘေးကနေ ပြစ်တင်ဝေဖန် နေမယ့်အစား မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး တစ်ခုလိုဖြစ်ပြီး အားနည်းချက်တွေ ရှိနေသေးတဲ့ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီး ဆောင်ရွက်ချင်ခဲ့တာပါ။
ရေအားလျှပ်စစ် စက်ရုံအသေးစားနှစ်ခု လည်ပတ် ထုတ်လုပ်ရေး၊ မန္တလေး- မြစ်ကြီးနား ရထားခရီးစဉ်တွေမှာ လက်မှတ်နဲ့ အခြားဝန်ဆောင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ သူ့ကုမ္ပဏီက ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရနဲ့ လုပ်ငန်းစာချုပ်တွေ ချုပ်ဆိုထားပါတယ်။
ဧရာဝတီမြစ်ကို ရင်းမြစ်အဖြစ် အသုံးချမယ့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပယ်ဖျက်ဖို့ ဆက်လက် တိုက်တွန်း ကြိုးပမ်းဆောင်သွားမယ်လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်ဟာ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်အတွင်းက တရုတ်နိုင်ငံကို သွားခဲ့ပြီး အဲဒီက ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ချေးငွေတွေပေးထားတဲ့ တရုတ်ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဘဏ်က အရာရှိကြီးတွေကို တွေ့ဆုံပြီး ဒီစီမံကိန်းကြီး အကြောင်းပြောတဲ့ အစည်းအဝေးမှာ မပြေမလည် ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
“သူတို့ပြောလိုက်တာက ငါတို့ကို မင်းတို့ အပြစ်အတင်သင့်ဘူး၊ မင်းတို့အစိုးရကိုပဲ အပြစ်သွားတင်၊ မင်းတို့ကို ပေးသင့်သမျှ အားလုံး ပေးခဲ့ပြီးပြီလို့ သူပြောတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ဘယ်လောက်ပေးလဲဆိုတာ ကျွန်မတို့ မသိပါဘူး၊ အစိုးရကလည်း မကြေညာဘူးပေါ့နော်။ သူကလည်း သူတို့ ဘယ်လို ဆက်လုပ်လို့ရမလဲ ဆိုတာကို ဆက်မေးတယ်။ ဒါက ကချင်ပြဿနာတင် မဟုတ်ဘူး၊ ဧရာဝတီကို သတ်တာဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့လူတွေကို သတ်တာပဲ၊ No Way (လက်ခံနိုင်စရာ အကြောင်း မရှိဘူး) လို့ ပြောခဲ့တယ်”
ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်ဟာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် ပျက်သွားပြီး တိုက်ခိုက်မှုတွေ ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အပေါ်မှာ စိတ်ပျက်မိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“နှစ်ငါးဆယ်လောက်ကြီး စစ်ဖြစ်တဲ့အထဲမှာ ဒီလောက်အကြာကြီး စစ်ရှောင် (ဒုက္ခသည်) တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မကြုံဖူးဘူး။ လက်နက်အင်အားကလည်း မတူတော့ဘူး။ ခံရတဲ့သူတွေ ပိုပြီးခံရတာပေါ့။ ကုစားရမယ့်ဟာတွေ အများကြီး ဒီရှေ့မှာရှိနေတယ်” လို့ သူက ဆိုပါတယ်။
ဒီပြည်တွင်းစစ်ကို ရပ်ဆိုင်းနိုင်ရေးဟာ မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်မယ့် ဖက်ဒရယ်စနစ် ပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်လို့ သူကမြင်ပါတယ်။
“(ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု စနစ် လှုပ်ရှားခဲ့တာကတော့) ကျွန်မအဖေရဲ့ အမွေတစ်ခုတည်းလို့တော့ မမြင်ပါဘူး၊ အားလုံးစုပေါင်းတဲ့ အမွေပါ၊ အဖေက လူထုရဲ့ဆန္ဒကိုပဲ ဖော်(ဆောင်)တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အားလုံးမျှော်မှန်းတဲ့ အရာကိုရအောင် ဆက်ပြီး လုပ်ဆောင်သွားမှာပါ” လို့ ဒေါ်ဂျာဆိုင်းခေါန်က ပြောလိုက်ပါတယ်။
သင်းလဲ့ဝင်း - Myanmar Now
Photo - သင်းလဲ့ဝင်း - Myanmar Now
မန္တလေး-မူဆယ်လမ်းပိုင်းတွင် ခရီးသွားများ ကြံ့ကြာမှုကြောင့် ကုန်တွဲကားများ သွားလာမှု ကန့်သတ်သင့် ================
မန္တလေး-မူဆယ်လမ်းပိုင်းတွင် ခရီးသွားများ ကြံ့ကြာမှုကြောင့်
ကုန်တွဲကားများ သွားလာမှု ကန့်သတ်သင့်
မန္တလေး-မူဆယ်လမ်းပိုင်းမှ ကွတ်ခိုင် ရှုခင်းသာတွင် တွဲယာဉ်များကြောင့်
ယာဉ်ကြောများပိတ်ဆို့ မှုဖြစ်ပွားနေ သဖြင့် ခရီးသွားများမှာ ပုံမှန်ထက်
ညအိပ်သွားလာနေရကာ ကြံ့ကြာနေသဖြင့် ကုန်တွဲကားများ သွားလာမှုကို
ရှုခင်းသာတွင် အများဆုံးလမ်းပိတ်နေပြီး ခရီးသည်များမှာ
မန္တလေး-မူဆယ်ခရီးစဉ်၌ ၁၃-နာရီခရီးကို တစ်ရက်မှ နှစ်ရက်ကြာတတ်ပြီး
ယင်းနေရာမှ မူဆယ်သို့ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် ငှားရမ်းကာ
“ရှုခင်းသာမှာ တွဲကား တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ ကားတွေ အားလုံးပိတ်မိတယ်။
ကားသေးလည်းသွားလို့ မရ တော့ဘူး။အတက်ရော/အဆင်းရော
ပိတ်တာပါ။ကုန်တင်တွဲကားတွေ အတက်အဆင်းသွားလာတဲ့ ရက်ကို
ကန့်သတ်ပေးသင့်တယ်။”ဟု ခရီးသည်ယာဉ်လိုင်းမောင်းနှင်သူ ကိုမြင့်ဆွေက
အဆိုပါလမ်းပိုင်းတွင် ကုန်တင်တွဲကားများမှာ နေ့စဉ်
ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေုးလုပ်ဆောင်နေကြရာ သွားလာ နေ ကြသည့် ယာဉ်များနှင့်လမ်းပိုင်းအနေအထား ကိုက်ညီမှုမရှိတော့၍ ကုန်တင်တွဲကားများအား အတက်နှင့်အဆင်းကို ရက်သတ်မှတ်ပါက ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု မရှိနိုင်တော့ဟု အကြံပြုသည်။
“တွဲကားတွေ ကြောင့်ဖြစ်ရတာ။ခြောက်ဘီးနဲ့ ၁၂-ဘီးကုန်တင်ကားတွေ ဆိုရင် တော့ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ် ဘူး။ အဓိက၂၂-ဘီး/၂၄-ဘီးတွဲကားတွေကြောင့်ဖြစ်တာ။မူဆယ်လမ်းကို တောင် ပေါ်လမ်းဖြစ်လို့
ရှောင်တိမ်းစရာမရှိဘူး။”ဟုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြိးယာဉ်လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်မှုကော်မတီ (အဝေးပြေး)ဥက္ကဌ ဥိးအောင် ကျော် လင်းကပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း မန္တလေးမြို့နှင့်မူဆယ် နယ်စပ်မြို့မှ
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှ အဓိကလမ်းပိုင်းဖြစ်၍
ကုန်တင်ကားများ၊ခရီးသည်ယာဉ်လိုင်းများနှင့်အိမ်စီးကားများနေ့စဉ်သွားလာမှု များပြား ခြင်းကြောင့်ကုန်တင်တွဲယာဉ်ကြီးများလမ်းပိုင်းတွင်
“ဖြတ်သန်းရတဲ့ တိုးဂိတ်တွေမှာ မလိုအပ်ဘဲ ခရီးသည်ယာဉ်တွေကို
စစ်ဆေးတာတာကလည်း ယာဉ်ကြောပိတ် ဆို့ တာပဲ။တွဲကားတစ်စီးက လမ်းမှာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင် ရှုခင်းသာနေရာမှာ ရှောင်ထွက်စရာ မရှိဘူး။ အဲဒီမှာလမ်းပိတ်ပြီး ညအိပ်ရတာပဲ။ ၁၀၅-မိုင်မှာ လမ်းပိတ်တတ်ပေမယ့်
နာရီပိုင်းလောက်ပဲကြာတယ်။”ဟု ယာဉ်မောင်းက ဆက်လက်ပြောသည်။
ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့ပါကနီးစပ်ရာနေရာတွင်အစားသောက်ဝယ်ယူစားသောက်နေကြရကြောင်း၊ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့သည့်အခါမန္တလေး-မူဆယ် ပုံမှန်သွားလာရန် ကြာချိန်ထက် တစ်ရက်မှနှစ်ရက်ထိကြာမြင့်သဖြင့် ခရီးသွားများအခက်အခဲရှိနေ ကြောင်းသိရသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် နီးစပ်သူ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် သူရ ဦးအောင်ကိုသည် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနှင့် ဆက်လက် လက်တွဲတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
ယနေ့ နောက်ဆုံးကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာသူ သူရဦးအောင်ကိုက နိုင်ငံရေးကို တသီး ပုဂ္ဂလအဖြစ် လိုအပ်သည့်နေရာမှသာ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ NLD က ကမ်းလှမ်းလာပါကလည်း ပြည်သူ့လူထု အကျိုးအတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း မီဒီယာများသို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
သူရ ဦးအောင်ကိုက“ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီဝင်အနေနဲ့တော့ နိုင်ငံရေးမှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားဖို့ မရှိတော့ပါဘူး။ တသီးပုဂ္ဂလအနေနဲ့ပဲ နိုင်ငံသားတွေအတွက် ဘယ်ပါတီ အဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆို လက်တွဲသွားမှာပါ။ ပါတီက နုတ်ထွက်ဖို့ကတော့ ကိုယ်ကတင်ဖို့ မလိုဘူး ထင်ပါတယ်”ဟု မီဒီယာများသို့ ပြောသည်။
ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးထက် မြန်မာ့ ရွှေဈေးပို၊ဈေးကွက်အတွင်းဝ...
မန္တလေး-မူဆယ်လမ်းပိုင်းတွင် ခရီးသွားများ ကြံ့ကြာမှု...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် နီးစပ်သူြ...
ကချင်ပြည်နယ် ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်မှ အသက် ၁၈ နှစ်အရွယ...
မြောက်ကိုရီးယားက တာဝေးပစ် ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်ဖွယ်ရှိ၍ ...
ဒေါ်စု အစိုးရ မှားတဲ့အချိန် ၊ အသေအကြေပြန်တွယ်ကြချိန...
ပရီမီးယားကော်ဖီ ကျပ်သိန်းတထောင်ဆုနှင့် ဆုမဲပေါင်း ...
သေဒဏ်ကျမြန်မာလုပ်သားနှစ်ဦးကို နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော...
လယ်ယာမြေပေါ်တွင် ခွင့်ပြုချက်မဲ့ အခြားလုပ်ငန်းလုပ်သ...
ဒုက္ခသည်ပြည်သူနဲ့ KIA သောင်းကျန်းသူ
အမေစု ဒီနေ့ပြောသမျှ မှတ်မိသမျှ ပြန်ရေးရရင် ....
ရွှေတိဂုံစေတီပေါ်တွင် အပူဇော်ခံထားသည့် ဗုဒ္ဓအရိုးဓာတ်...
EU ( European Union) ကွဲနေပြီ
အယ်နီညိုဖြစ်စဉ် မေလကုန်အထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အပူချိ...
ဘွန်ဒစ်လီဂါပြိုင်ပွဲ (၁၁)ရာသီဆက် ၀င်ငွေစံချိန်တင်
မြန်မာလူမျိုးတွေ စေတနာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ အ...
အမြီးအမောက်မက တောင်ပံနဲ့ ခြေထောက်ပါလွဲနေကြပြီ
NLD အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး...
ပရီးမီးယားလိဂ် - စနေနေ့ ( ၂၃ . ၁ . ၂၀၁၆ ) ဘောလုံးပ...
ဦးတင်ဦးကို သမ္မတ တင်မယ်ဆိုကတည်းက NLD မှာ တစ်ခြားသ...
SYH A9002 (9") (WiFi) Ks 77,000 Ks 77,000 ယခု ၀...
Samsung Galaxy Tab S2 (9.7") (4G) - ရွှေရောင်-4% K...
မူဆယ် ဗဟိုစီးပွားရေးဇုန် ဆိုင်ခန်း ကျပ် သိန်း တသော...
မျက်နှာဝိုင်းတဲ့ လူတွေအတွက် ဆံပင်စတိုင် (၁၃) မျိုး...
အလှမပျက်စေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံ (၁၀) ...
ဘယ်သူမှ ပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ မရှိပါ
Singles မဂ္ဂဇင်း အတွက် ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဘိုရာ
ကမ္ဘာကျော်ရခြင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ဖွင့်ချခဲ့တဲ့...
ရှိုးပွဲမှာ ကောက်ကြောင်းအလှကို ပြခဲ့တဲ့ ဂျေလို
အသည်းကို သန့်ရှင်းစေနိုင်တဲ့ အစားအစာ (၆) မျိုး
ခန္ဓာကိုယ် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု သက်သာစေမယ့် မီးဖိုချောင်...
မိန်းကလေးတွေမှာ ရုပ်ချောတာထက် ယောကျာ်းလေးတွေ ရှိစေ...
ပန်းပွင့်လေးတွေ ခြယ်သထားတဲ့ အတွင်းခံအောက်က ရိုစီရဲ...
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကောင် ဝတ်စုံနဲ့ လုံးကြီးပေါက်လှ ကယ်လီဘ...
ဒီမီ လိုဗာတိုရဲ့ မပြုပြင်ထားတဲ့ ရေချိုးခန်းထဲက ဓာတ...
အမန်ဒါရဲ့ ရေချိုးခန်းထဲက ပုံရိပ်
ညစ်နေရင် လန်းသွားအောင် ကခုန်ပါ
ဒူဘိုင်းမြို့ရဲ့ သိပ္ပံဇာတ်ကားအသွင် မြင်ကွင်းများ
အီတလီခေါက်ဆွဲ အိမ်မှာ ချက်ကြည့်ကြမယ်
ချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်စေမယ့် အလွယ်ဆုံးနည်း (၃) နည်း...
ရန်ကုန်မှာ နှစ်ရက်တစ်ယောက်နှုန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ...
ရေကူးကန်ထဲမှာ မြူးတူးနေတဲ့ ဗြိတိန်မင်းသမီးနှစ်ဦး
သန့်ရှင်းဖို့သင်မေ့နေတဲ့ အိမ်ထဲကအရာ (၅) ခု
နေရာမရှောင် အိပ်တဲ့ ကလေးငယ်တွေ
သင့်ရည်းစားကို မလိမ်သင့်တဲ့ အချက် (၁၃) ချက်
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်မှ မိုးပြာ...
သိချင်လွန်းလို့ ကျွန်တော်မေးမိ၊ အပြစ်ရှိသလား
တပ်ချုပ်ပုံကို မဖွယ်မရာပြုလုပ်သူ ကချင်အမျိုးသား ပက...
တရက်အတွင်း အမျိုးသား ၉၁၉ ယောက်နဲ့ အိပ်ပြီး စံချိန်...
“ပညာရေးစစ်တမ်း - ပညာရေးမူးလား၊ ပညာရေးမှူးလား”
ပိဋကတ်သုံးပုံဆောင် တိပိဋကဓရဆရာတော်တစ်ပါးပေါ်ထွက်လာ ...
သွားနှုတ်တဲ့အခါမှာ လုံးဝမနာတော့မယ့် နည်းပညာ
ထောပတ်သီးကို အမြန်မှည့်အောင် လုပ်နည်း
ဥရောပကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ အဒဲလ်၊ အမ်မာဝပ်ဆန်နဲ...
ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့် ခဏခဏ ဟက်ခံရတဲ့ နေတိုး
ကလေးပြည့်တန်ဆာအကြောင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့သူ နိုင်ငံတကာသတင...
အသက်အရွယ်အလိုက် တစ်နေ့ ဘယ်လောက်အိပ်သင့်လဲ
ဘုရင်စနစ်ကို Facebook မှာ ဝေဖန်တဲ့ ထိုင်းအမျိုးသား...
Victoria's Secret နတ်မိမယ်ရဲ့ ဆက်စီကျတဲ့ ကော်ဇောနီ...
ပါကစ္စတန်က တက္ကသိုလ်တစ်ခု အကြမ်းဖက်သမားတွေ ဝင်တိုက်လ...
BMW ပိုင်ဆိုင်သူများနဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း (၂)
ဉာဉ့်နက်မှ အိပ်ယာဝင်သူတွေ ပိုတော်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်...
ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ် မတင်သွင်းသူနှစ်ရာကျော်ကို ...
လာမည့် လွှတ်တော်တက်မည့် အမတ်များတွင် မူလတန်း တစ်ဦး...
အစိုးရသစ်၏ ပထမဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ကျပ်ဘီလီယံ နှစ်သောင်းကျေ...
မိုးညှင်းခရိုင် တရားရုံးအမှုတွဲခန်း အဆောက်အအုံဖွင့်...
တူးပို့ နာမည် မသုံးတော့ဘူးလို့ ကုမ္ပဏီ ပြော
အစိုးရ ဦးဆောင်မဖွဲ့ရရင် အတိုက်အခံ အဖြစ်နေမယ်လို့ A...
ရန်ကုန်ဝန်ကြီးချုပ်အမိန့်ဖြင့် လှိုင်သာယာအနှံ့ ၀င်စ...